Izindaba - Izembozo ezingama-2019 ziphela ngokuphelele
Izembozo ezingama-2019 ziphela ngokuphelele
Ngo-Ephreli 2019, uBontai wabamba iqhaza kwiZembozo ezingama-4 zezinsuku ezingama-2019 e-Orlando, e-USA, okuyi-International Tile, Stone and Flooring Exposition. Ukumboza uNdunankulu waseNyakatho Melika ukuhweba ngobuningi nokusobala, kudonsela izinkulungwane zabasabalalisi, abathengisi, osonkontileka, abafake izinto ezithile, abahlaziyi kanye nabakhiqizi, bonke bafuna ukuthambekela kwakamuva, imishini nezinto ezintsha.
Embukisweni, imikhiqizo yethu, ikakhulukazi amaphakethe edayimane wokuphola, yamukelwa abathengi, futhi amakhasimende ajwayelekile azwakalisa ukuzimisela kwawo ukuqhubeka nokubambisana. Ngasikhathi sinye, imikhiqizo yethu nayo yathandwa ngabathengi abaningi abasha.
Kuhle ukusho ukuthi sithole ukuthi imikhiqizo yethu yensimbi nayo ingasetshenziselwa ukubeka phansi izinkuni ngesikhathi sombukiso wokwakhiwa esakhiweni sombukiso, futhi sikuzuze ngokuphelele ukwenziwa kwemininingwane yokuphola. Lokhu kutholwa akugcini nje ngokuthuthukisa ukuphakama kwemikhiqizo yethu, kodwa futhi kugqugquzela iBontai ukuthi ibe yintsha.
IFuzhou Bontai Diamond Tools Co, Ltd yasungulwa ngonyaka ka-2010, inomenzi wayo onguchwepheshe wokuthengisa, ukuthuthukisa nokwenza ezinye izinhlobo zamathuluzi edayimane. Sinezinto ezahlukahlukene zokugaya amadayimane nokugaya polishing kohlelo lokupholisa phansi, kufaka phakathi izicathulo zokugaya idayimane, amasondo endebe yedayimane, amadiski okugaya amadayimane namathuluzi e-PCD. Ukusebenza ekugayeni kwezinhlobonhlobo zekhonkolo, i-terrazzo, phansi kwamatshe namanye amaflethi okwakha. Siyaqhubeka nokuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye zamakhasimende ethu, imikhiqizo eyenziwe ngezinto ezinhlobonhlobo, sithuthukisa inani lemikhiqizo yethu, futhi ngokuqhubekayo sakha inani eliningi kumakhasimende ethu. Lwela umhlinzeki wamathuluzi wedayimane amahle kakhulu emhlabeni.